UGumede uzenza ongakhathazekile njengoba izinkinga zakhe zikhula | Scrolla Izindaba
UGumede uzenza ongakhathazekile njengoba izinkinga zakhe zikhula
UZandile Gumede uzenza umuntu oqinile ukukholisa izinkumbi zabalandeli bakhe kwi-ANC KwaZulu-Natali ukuthi usengasinda emzamweni wakamuva wokumsusa esikhundleni sikahulumeni.
Empeleni ungomunye wabaholi abaningi be-ANC ababekwe icala lenkohlakalo okungenzeka baphoqeleka ukuba bashiye ezikhundleni zabo.
IKomidi eliPhethe le-ANC linikeze abanjengaye kanye noNobhala-Jikelele u-Ace Magashule izinsuku ezingama-30 kuphela ukuthi bashiye izikhundla zabo kuze kube wukuthi izinkantolo zithi abanacala.
UMengameli uCyril Ramaphosa akazange awagwinye amazwi akhe ngesikhathi evala umhlangano wokugcina we-NEC.
“Lezi zinsuku ezingama-30 zizosetshenziselwa ukuqaliswa kwesinqumo ngokuhambisana nemikhombandlela futhi akusikhona ukuthi kubuyekezwe isinqumo,” kusho uRamaphosa.
Kulolu daba lukaGumede angalindela ukuthi alahlekelwe ngumholo wakhe nezinzuzo ezihambisana nokuba yilungu lesiShayamthetho sesiFundazwe.
“Ngizolinda iqembu lami lingitshele ukuthi ngenzeni. Uma lokho kungenzeki, ngizoqhubeka nomsebenzi wami,” kusho uGumede, owayeyiMeya yeTheku, etshela abakwa-Scrolla.Africa.
Kuzobe kungekho okokuqala uGumede etshelwe ukuthi ehle esikhundleni njengoba ebhekene namacala asukela kwithenda yemali eyizigidi ezingama-R320 ye-Durban Solid Waste ekhishwe ngesikhathi sakhe njengemeya ngowezi-2017.
ngoNcwaba, uGumede wakhishwa esikhundleni njengelungu lePhalamende, ngemuva nje kokufakwa kulesi sikhundla.
Kodwa-ke, wabuyiselwa emsebenzini wakhe ngoZibandlela ne-ANC ethi akazange alahlwe yicala ngemuva konyaka ethweswe icala.
“Izandla zami zihlanzekile. Ngizobuyiselwa enkantolo,” esho.
NjengoMagashule, uGumede uthe amanye amalungu asebenzisa le nqubo ukuqhelisa labo abaphikisana nabo kwezepolitiki.
“Lokhu kuzobuyela emuva,” esho.
Iqembu libhekene nenye inkinga njengoba kumele liphinde limsuse futhi kwisiShayamthetho.
Abakwa-Scrolla.Africa bathole ukuthi kunabantu abathembekile abangaphakathi bakaGumede noMagashule nabanye ababhekene namacala abakha iqhinga lokuphikisana nalokhu.
UMagashule wafunga wagomela ukuthi uzolwela ukusindisa umsebenzi wakhe ngokugcwele e-Luthuli House.
“Angiyi ndawo,” utshele abakwa-Scrolla.Africa.
Umthombo wesithombe: @GumedeZandileRT